Itoobiya: Barlamaanka oo ansixiyay Xukunkii degdegga ahaa ee dalka lagu soo rogay – Kasmo Newspaper
Itoobiya: Barlamaanka oo ansixiyay Xukunkii degdegga ahaa ee dalka lagu soo rogay
Updated - March 2, 2018 6:44 pm GMT
London (Kasmo), Barlamaanka Itoobiya, oo fasixiisii ka dib, kulan degdeg ah yeeshay, ayaa ansixiyay xukunkii degdegga ahaa (SOE) ee Golaha Wasiirradu ku soo rogeen dalka, ka dib istiqaaladdii Ra’iisal Wasaare Desalegn 15kii Febraayo.
Xukunka degdegga ah wuxuu xayiraado kala gesdisan, sida mamnuucista dibadbaxyada, abaabulka kulammada aan ruqsadda loo haysan, uu saarayaa dadweynaha,si loo sugo xasilloonida loona ilaaliyo nabadgalyada.
Herman Cohen, Dibolomaasi hore oo Maraykan ah ayaa laga wariyay in Abiy Ahmed Ali, Hoggaamiyaha Xisbiga OPDO ee Orommada loo wado in loo magacaabo xilka Ra’iisal Wasaaraha, laakiin muhiim tahay in Xukuumaddu marka hore qaaddo xukunka degdegga ah.
Xoghayaha Arrimaha Dibadda Maraykanka, Rex Tillerson ayaa la sheegay in uu toddobaadka soo socda ku wajahanyahay Addis Ababa, si uu Xukuumadda ugala hadlo qalalaasaha siyaasadeed ee dalka ka taagan hadda.
Safaaradda Maraykanka ee Addis Ababa ayaa ka gaabsatay in ay faallo ka bixiso safarka la sheegay ee Dibolomaasigooda Sare, Kolleyba, Waaxda Arrimaha Dibadda Washington ayaa ka soo saartay digniin safarrada Itoobiya.
Wargayska ‘Africa News’ oo soo xiganaya ‘Addis Standard News’ ayaa sharraxaya in booqashada Tillerson muujinayso sida Washington u danaynayso arrimaha Itoobiya. Dibolomaasigii u dambeeyay oo Maraykan ah oo Itoobiya booqda waxay ahayd Nikki Haley, Safiirka Washington u fadhiya Q.M. 23kii Oktoobar 2017kii.
Munaasibaddaas, Haley, kulan ay la qaadatay Ra’iisal Wasaarihii xilligaas Desalegn, waxay kaga codsatay in uu dhallinyarada cod siiyo, xuquuqul insaanka la hagaajiyo, aagga dimuqraadiyadda dalkana la ballaariyo.